"बिपी केमा चुके, केमा चुकेनन्?" - यादव देवकोटा (२०७१ श्रावण ६, सेतोपाटी)
आजको दिनमा आफ्नो एकइन्ची स्वार्थमा दखल पुग्नासाथ प्रलय मच्चाउने सामन्त, जमिनदार, विर्तावालहरुले उतिबेला विपीको कदम बिरुद्ध कति आगो ओकले होला ? राजालाई विर्ता खारेजबिरुद्ध विन्तिपत्र चढाए । ठाउँठाउँमा सडक प्रदर्शन गरे । तर विपीले 'हावा, पानी घाम र भूमिमाथि त्यसको अधिकार हुन्छ, जो त्यसको भोगचलन गर्छन् । भूमिमाथि जोत्ने किसानको हक हुनुपर्छ । जबसम्म जोत्ने किसानको हक जग्गामाथि हुँदैन तबसम्म मलाई सन्तोष छैन (डा. सुर्यमणि अधिकारी, नेपाली कांग्रेसको इतिहास)' भनेर विर्तावालहरुको सामना गरे । आज गरिखाने किसानहरुलाई एकधुर जमिन दिने बिषयमा विपीले खोल्नुभएको र लडेर जोगाउनुभएको पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सबैभन्दा बढी बिरोधीका रुपमा उभिन्छन् । विपीका सपना र आर्दशहरुलाई टुकुचमा फालेर विपी हिँडेको बाटोमा पदयात्रा गर्ने आडम्बरी भक्तिभाव देखाउँछन् विपीप्रति जसरी वामपन्थीहरु माक्र्सका फोटो टाँसेर खोलिएका पार्टी कार्यलयहरुमा बसेर सामन्तहरुको जस्तो जिविका चलाउँछन् ।
विपीलाई पढ्दा विपिमा थुप्रै बिरोधाभाषहरु पाइन्छन् । नेपाली कांग्रेसको नाम राख्ने प्रकरणदेखि नै विपी विवादमा तानिन्छन् । उनका साथीहरु पार्टीको नाम प्रजापरिषद नै कायम राख्न जोड गर्छन् । खासगरि गणेशमान सिंहहरु । विपि भन्छन्–'अरु जे राखे पनि हुन्छ तर कंग्रेस चाँहि जोड्नै पर्छ । गान्धी, नेहरु जस्ता भारतीय नेताहरुको समर्थन हासिल गर्न पनि कंग्रेस राख्नै पर्छ (नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, राजेश गौतम) ।'
विपीले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई एकजुट भएर राणाबिरोधी आन्दोलनमा लाग्न र संगठित हुन अपिल गर्छन् । विसं २००३ कार्तिक १५ गते देवीप्रसाद सापकोटालाई सभापति र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई महासचिव बनाएर 'अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस' स्थापना हुन्छ । विरामी सापकोटालाई सभापति थपना गरेर विपि त्यसको संयोजक बन्छन् । २००३ माघ १२ र १३ मा कलकत्ताको भवानीपूरस्थित खाल्सा हाइस्कुलमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको महाधिबेशन आयोजना हुन्छ । राममनोहर लोहिया लगायत समाजवादी नेताहरु शुभकामना दिन आउँछन् । उद्घाटन सत्रमा भारतको तिरंगा झण्डा फहराइन्छ । गणेशमान बिरोधमा उत्रन्छन् । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दै अखिल भारतीय भन्ने शब्द पार्टीको नामबाट हटाउन पर्ने माग राख्छन् । झण्डाको बिरोध गर्छन् । विपि समारोह सभापतिको हैसियतले दोस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्छन्–'वास्तबमा नेपाल र भारत दुई देश हैनन् । के जातीय दृष्टिले, के आर्थिक दृष्टिले, के धार्मिक दृष्टिले, सबै दृष्टिले नेपाल भारतबर्षकै एउटा प्रमुख अंग हो । नेपाललाई भारतबाट भिन्न घोषित गर्नमा केवल बृटिश साम्राज्यवादको मात्र लाभ छैन, बरन् यसैमा राणाहरुको अस्तित्व समेत कायम छ । यसको मुलमा कुटनीतिक र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरुको चालवाजी मात्र छ । नेपाल स्वतन्त्र भन्नु गलत हो (राजेश गौतम, नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस) ।'
फेरि पनि गणेशमान विरोधमा उभिन्छन् । उनलाई सूर्यबहादुर भारद्धाज, सुन्दरराज चालिसे, डिवी परियारले साथ दिन्छन् । विवाद बढेपछि नेपाल स्वतन्त्र छ छैन भन्ने कुरा राणाशाही खत्तम भएपछि जनमत संग्रह गरि निणर्य गर्ने प्रस्ताब गरिन्छ । तर गणेशमानहरुको तिब्र बिरोधका कारण आङ्खनो भनाई फिर्ता लिँदै नेपाल स्वतन्त्र नै छ भन्ने कुरा स्विकार्छन् विपी । तिनै विपी राणा शासन ढलेर गृहमन्त्री भएको बेला भारतीय राजदुतलाई खुला विज्ञप्ति जारी गरेर चुनौती दिन्छन्–'राजदुतले आफुलाई यहाँ बसेर हिन्दुस्तानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमेनजस्तो ठान्नुहुँदैन ।' एकातिर त्यसरी विज्ञप्ति जारी गर्छन् अर्कोतिर मोहन शम्शेर नेतृत्वको सरकारको सेक्रेटारियट गठनको काममा सघाउन भारतीय सहयोग भित्र्याउँछन् । आत्मबृतान्तमा उनी भन्छन्–सेक्रेटारियट गठनको काममा सहयोग गर्न हिन्दुस्थानबाट हामीले दुईतीन जना बोलायौं । तर त्यो काम ठीक गर्‍यौं कि बेठीक त्यो त इतिहासले बताउला ।'
जेलमा बस्दा र भारतमा बस्दा पनि उनी भारतले आफ्नो आन्दोलनमा सरसहयोग गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । २००७ को दिल्ली सम्झौता मार्फत विपी, दरवार र राणाहरुले नेपाली राजनीतिमा खुलेआम निम्त्याएको भारतीय सक्रियताबाट आज देश शिथिल बनिसकेको छ । उनी अनिच्छापूर्वक भएपनि दिल्लीलाई स्विकार्छन् । नकार्दैनन् । इन्दिरा गान्धीसँग बोलचालै बन्द भएर भारतमा निकै नै अपमानित हुन थालेपछि नेपाल फर्कन्छन् राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर । उनको मेलमिलापको नीतिमा देशलाई निरंकुशताको प्रयोगशाला बनाउने दरवार मात्रै देखिन्छ । महेन्द्रले कु गर्न लाग्दा, विपीकै दाजु मात्रिकाले विपीबिरुद्ध अभियान चलाउँदा विर्नाशर्त विपीको समर्थन गरेका कम्युनिष्टप्रति आश्चर्यजनक तवरमा उनको मनमा रहेको आग्रह जीवनपर्यन्त कायम रह्यो र त्यही नकारात्मक आग्रहले देशमा निरंकुशताको आयु लामो बनेर अडियो । विपीले कम्युनिष्टहरुविरुद्ध राखेको आग्रहको सिरानी हालेर आजपर्यन्त खुम बहादुर खड्काहरु कम्युनिष्टहरुको बिरोधमा छन् । विपीले रोपेको वामपन्थीहरुविरुद्धको मनोमालिन्यको चेतनालाई गणेशमानले सहजतामा बदले र दाजुको 'स्कुल'मा पठित भएर कुनै समय माले मण्डले र मशाले एकै हुन् भन्ने गिरिजाप्रसादले निकै नै असाधारण तवरले त्यो दुरीलाई घटाउने भूमिका खेले । जबजब कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिले पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो । मिलेनन् दरवार बलियो भयो, जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले जित्यो ।
विपी सशस्त्र संघ्रर्षमा पार्टीलाई होम्न समेत डराउँदैनन् । हिंसालाई उनी सापेक्षतामा स्विकार गर्छन् । अनिवार्यताको हदसम्मको हिंसालाई स्विकार्छन् । उनी लेख्छन् पनि जेल जर्नलमा–'कुनै आर्दशका खातिर जानीजानी कसैले मृत्युलाई अंगीकार गर्छ भने त्यस्तो मृत्युमा हिंसा रहँदैन, केवल वलिदान रहन्छ ।' पार्टीले आङ्खनो पल्टन राख्नुपर्ने विश्वासमा विपी धेरै पछिसम्म अडिन्छन् । आम जनतालाई अमेरिकामा जस्तो हतियार राख्न दिनुपर्ने कुराको उनी वकालत गर्छन् । नागरिकलाई स्वीट्जरलैण्ड, इजरायलमा जस्तो शैन्य तालिम दिने र मास मिलिसिया बनाउने धारणा राख्छन् विपी । विपीको समय र अहिलेको समयमा हाम्रो सेनाको स्तर, छिमेकीको हामीप्रतिको रबैया कति फेरियो यसको पनि मूल्यांकन होला । तर एउटा निश्चित नियमित फौजले लडेर हाम्रो देश जोगिनेवाला छैन । विपीले उहिल्यै सोचिसकेको विषय अहिले संविधानसभामा आउँदा विपीको फोटो भएको लकेट छात्तिमा टाँसेर हिँड्ने विपीका अनुयायीहरु घोर विरोधमा उत्रिएका छन् । मिलिसियाको त के कुरा, आज जोत्नेलाई जमिन दिने कुराको सबैभन्दा बिरोधीको रुपमा विपीहरुले नै जन्माए, हुर्काएको पार्टी नेपाली कांग्रेस बनेको छ ।
धेरैपछिसम्म पनि विपीलाई नेपालको शाही सेनाप्रति गुनासो रहिरहन्छ । त्यो सधैं अभिजातहरुको पक्षमा उभिएको विपीले देखे, भोगेका थिए । विपी सुन्दरीजलको बन्दीगृहमा थक्थकाउँछन् मुक्ति सेना विघटन गरिएकोमा । जेलजर्नलको पृष्ठ १५६, १५७ मा विपी थक्थकाउँछन्–'अक्षम्य भूल यही भयो कि पल्टनपट्टी हामीले ध्यान दिएनौं ।' सेनालाई सिंहदरबाट झिकेर नारायणहिटीमा राख्ने निणर्यले पनि विपीलाई पछिसम्म पछुतो भइरह्यो । आत्मबृतन्तमा लेख्छन्–मेरो अज्ञान! त्यसदिनदेखि राजाको हात माथि पर्‍यो र प्रजातन्त्रको हात तल । त्यो पल्टन हातमा आउने वित्तिकै देखि राजाको प्रबृत्ति अर्के भयो । त्यसदिनदेखि राजा वलिया भए ।
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ६, सेतोपाटी